FSX Isiqalo seCaptain Sim C-130
iminyaka 2 9 izinyanga ezedlule #89 by Gh0stRider203
KUPHELA into Ngikhohliwe kwaba imisakazo Heh
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: yvomai
iminyaka 2 9 izinyanga ezedlule #90 by superskullmaster
Angikwazi ukulinda kuze sithola C-130J kusukela Milviz. Kuzoba abe abanikeze asebenza nabo kweqiniso olusha.
iminyaka 2 9 izinyanga ezedlule #91 by Gh0stRider203
Mina empeleni Kinda like ukubukeka okudala-esikoleni. yeah i abanikeze asebenza nabo olusha Kungaba mnandi, nakuba .... kodwa ungenaso isiqiniseko UMA CS uye ukuthi kuhlelwe noma cha.
iminyaka 2 9 izinyanga ezedlule - iminyaka 2 9 izinyanga ezedlule #92 by superskullmaster
Intulo Captainsim ...... Milviz usebenzela omunye. Futhi akuve kude kakhulu kanye.
Ukuhlela kokugcina: iminyaka engu-2 izinyanga ezingu-9 ezedlule superskullmaster.